Iidolophu zedijithali- singabusebenzisa njani ubuchwephesha njengale nto inikwa ziiSIMEMS-iGeofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/Iidolophu zedijithali- singazisebenzisa njani iitekhnoloji ezinje ngeSIMEMENS
Udliwanondlebe lweGeofumadas eSwitzerland kunye no-Eric Chong, uMongameli kunye ne-CEO, i-Nokia Ltd.
I-Nokia yenza njani lula ukuba umhlaba ube nezixeko ezibukhali? Yeyiphi iminikelo yakho ephambili evumela oku?
Iidolophu zijongana nemiceli mngeni ngenxa yeenguqu eziziswe zi-megatrends zedolophu, ukutshintsha kwemozulu, ukudityaniswa kwehlabathi kunye nedemokhrasi. Kuzo zonke izinto ezintsonkothileyo, bavelisa amanani amakhulu eedatha ezinokuthi zisetyenziswe ngumgaqo wesihlanu wokufumana ulwazi ukufumana ulwazi kunye nokwenza iinkqubo ezixhasa ulwakhiwo lwedolophu.
Kwi-Siemens, siphakamisa i-MindSphere, inkqubo yethu yokusebenza ye-IoT esekelwe kwifu, ukwenzela ukuba le "sixeko esihlakaniphile." I-Mindsphere inikwe i-"Best in Class" iqonga le-IoT yiPAC. Ngobuchule bayo be-Open Platform-as-a-Service, inceda iingcali ngokubambisana ukwenza isisombululo sesixeko esihlakaniphile. Ngokusebenzisa amandla ayo e-MindConnect, yenza uxhulumaniso olukhuselekileyo lwe-Siemens kunye neemveliso zomntu wesithathu kunye nezixhobo zokubamba idatha yexesha langempela lohlalutyo lwedatha enkulu eyenza izicelo ezahlukeneyo ze-Smart City. Idatha eqokelelwe kwisixeko ngokubanzi inokuba lulwazi kubacwangcisi besixeko kunye nabaqulunqi bemigaqo-nkqubo ukucacisa uphuhliso lwexesha elizayo lwesixeko esikrelekrele. Ngophuhliso oluqhubekayo lobukrelekrele bokwenziwa kunye nohlalutyo lwedatha, iya kuqhubela phambili inkqubo yokuguqula idatha ibe yingqiqo kwaye ivelise imibono emitsha yezicelo zedolophu ezihlakaniphile ezinokunceda ukuhlangabezana nemingeni yasezidolophini ebangelwa yi-megatrends kunye nokwandisa amandla ezixeko ezihlakaniphile. .
Ngaba izixeko ziya zisiba bukhali kwisantya esifunayo? Uyibona njani inkqubela phambili? Iinkampani ezinjengeNokia zinganceda njani ukukhawulezisa isantya?
Umhlaba uya usazi ngakumbi ngophuhliso lweedolophu ezihlakaniphile. Abathathi-nxaxheba abanjengoRhulumente, ababoneleli bezixhobo zokusebenza, iinkokeli zeshishini, zisebenza ngokuqhubela phambili ukutshintsha. EHong Kong, urhulumente waphehlelela i-Blueprint ye-Smart City entle ngo-2017, eyayibeka umbono wophuhliso lweSmart City yethu ngeBlueprint 2.0 ngendlela. Ukongeza ekubekweni kwezikhokelo ezicacileyo zeli shishini, urhulumente ukwanikezela ngenkuthazo yemali njengokuxhasa ngezemali kunye nokuncitshiswa kwerhafu ukuxhasa uphuhliso kunye nokufakwa kwezinto ezintsha kwesi sihloko sikhula ngokukhawuleza. Okubaluleke ngakumbi, kukukhokela ngamanyathelo ezixeko eziphucukileyo afana neEnergizing Kowloon East, apho kuqhutywa ubungqina be-concepts. Siyavuya ukufaka igalelo kumava ethu kwii-PoCs, umzekelo:
Ukufakwa kweKerbside / Inkqubo yokuBek 'esweni- ukuBhengeza amandla okwenza indawo ebalulekileyo ye-gutter kunye noncedo lwabasebenzisi ukufikelela kulayisho olukhoyo / lokukhuphela bay nge-AI.
Inkqubo yeDatha yokuSebenza koMbane-Ukufakelwa izixhobo zokubane zombane zekhaya ezifanelekileyo zedatha yangempela yokusetyenziswa kombane ukuze abasebenzisi bakwazi ukulandelela iipatheni zokusebenzisa kunye neesoftware ukuphucula ukusetyenziswa kombane.
Ukongeza ekuziseni ubuchwephesha behlabathi, sikholelwa ukuba singanako nokwakha inkqubo echulayo yendalo. Ukulungiselela le njongo, sityale imali kwi-Smart City Digital Hub kwiPaki yeSayensi ukubonelela ngeqonga lokuqalisa, iingcali zetekhnoloji, kunye nababoneleli beziseko zophuhliso ukwakha ipotifoliyo yabo yedijithali kunye nokuphuhliswa kwezicelo ezihle zesixeko.
Iinzame zethu eHong Kong zifana neenzame zethu kwenye indawo ukunceda izixeko zibe nobukrelekrele. Ngokomzekelo, eGreat Britain, sisebenzisana neLondon ekwakhiweni kwe "Arc of Opportunity". Yimodeli yesiXeko esiSmart ekhuthazwa licandelo labucala kwingingqi kunye nentsebenziswano neGunyabantu laseLondon eliKhulu, apho kuqhutywa khona uthotho lwamaphulo esixeko agxile kumandla, ezothutho kunye nezakhiwo.
EVienna, e-Austria, sisebenza kunye nesixeko sase-Aspern kwisakhiwo esibonakalayo seSmart Cities Demonstration Ilabhoratri yokuyilwa kunye neenkqubo zezixeko eziphucukileyo, kugxilwe ekusebenzeni kwamandla kunye nakulwakhiwo lobuchule kunye nokuphuhlisa izisombululo zamandla ahlaziyekayo, ulawulo lwegridi. amandla ombane aphantsi, ukugcinwa kwamandla kunye nokulawula okubonakalayo kwinethiwekhi yokusabalalisa.
Yintoni eyakwenza wacinga ngokuseka iziko ledolophu elili-digital smart?
Umbono wethu iZiko leDijithali leSmart City kukukhawulezisa uphuhliso lwesixeko esisebenzayo ngokusebenzisana kunye nophuhliso lwetalente. Iphuhliswe yi-MindSphere, inkqubo yokusebenza ye-IoT esekwe ngamafu, iziko lenzelwe njengelebhu evulekileyo eyenza iR & D kwizakhiwo, amandla kunye nokuhamba. Ngokuphucula ukunxibelelana kwe-IoT, ihabhu yethu yedijithali ijolise ekuncedeni ababandakanyekayo kuchonge ubuthathaka besixeko sethu kunye neenkampani zenkxaso ukuba zikhulise amashishini abo ngokwenza iidijithali.
Sinethemba lokuba iziko liya khuthaza italente yangomso eHong Kong yokuxhasa ukukhula koqoqosho lwesixeko esilumkileyo. Ngesi sizathu, iziko liqalise i-Mindsphere Academy ukubonelela ngoqeqesho kunye nokusebenzisana neBhunga eliQeqeshayo leZakhono zoMsebenzi ukunceda ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzi nokukhuthaza abathathi-nxaxheba kolu shishino.
Yeyiphi imisebenzi ephambili yeli ziko?
IZiko lethu leDijithali leSmart City linenjongo yokuba kudalwe indawo ekukutsha kuyo isixokelelwano sendlela esisebenza kuyo ngokusebenzisana namahlakani endawo afana nabanikezeli boncedo, amaziko emfundo, kunye nokuqalisa. Iziko lijolise ukusebenza njengomnxibelelanisi wokwabelana ngolwazi malunga neetekhnoloji ze-IoT eziphambili, ukukhuthaza amacandelo ukuvula idatha yezicelo ezihle zedolophu, ukuvelisa ulwazi ngombono ogcweleyo wezibonelelo zedolophu, kunye nokuvavanywa kwezicelo ezihle zedolophu. Eyona njongo iphambili yokwakha isixeko esilumkileyo eHong Kong kunye nokuphucula ukubakho kwesixeko sethu.
Nguwuphi ummandla obona inkqubela phambili ekumanani idijithi?
Sibona inkqubela phambili kumacandelo okwakha, ezamandla kunye nawokufuduka awona azuze lukhulu ngokufakwa kwikhompyutha.
Izakhiwo zezona basebenzisi bamandla esixekweni, zisebenzisa i-90% yombane eHong Kong. Kukho amandla amakhulu okuphucula ukusebenza kakuhle kwamandla, ukunciphisa impembelelo yayo kokusingqongileyo, kunye nokulawula indawo yangaphakathi ngobukrelekrele ngokunyuka kwetekhnoloji eqhutywa yi-AI. Ngokomzekelo, inkqubo yethu yokulawula "AI Chiller" ibonelela nge-24 × 7 ukubeka iliso kwimeko ye-chiller plant, ukubonelela ngeengcebiso ngokukhawuleza kwiqela lezakhiwo zokwakha ukuze kulungiswe imisebenzi yabo ngokuqhubekayo. Omnye umzekelo “zizakhiwo ezikwaziyo ukuthetha” ezinxibelelana ngokungenamthungo kunye nenkqubo yamandla ukuze kudaleke inkqubo yendalo esabela kwiimfuno zezakhiwo nabantu abahlala kuzo ngelixa iqinisekisa ukuba imithombo yamandla exabisekileyo yesixeko isetyenziswa ngobulumko.
Kwisixeko esinabantu abaninzi njengeHong Kong, kunokubakho amandla amakhulu okwenza ubungakanani bemveliso yokuhamba ukuze kube namava okuhamba angenamthungo kubahlali bayo. Ukuveliswa kwezinto ezintsha eV2X (izembe lesithuthi) zenza unxibelelwano oluqhubekayo phakathi kwezithuthi kunye nezibonelelo ezixhasa ukusetyenziswa kwezicelo ezifana nezisombululo ezilumkileyo zokulawula iimeko zendlela ezintsokothileyo kwiindawo zedolophu. Obu buchwephesha xa busenziwa ngomgangatho bukwabalulekile ekusebenzeni ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo kwezithuthi ezizimeleyo esixekweni.
Sixelele ngentsebenzo ephakathi kweSystems kunye neNokia: Ngaba le ntsebenziswano ilinceda kanjani icandelo leziseko zophuhliso?
Isoftware yeNokia kunye neVeneral System zinembali yokuxhasa iipotifoliyo zazo kwilayisensi yeetekhnoloji nganye ukubonelela ngezisombululo kwicandelo lefektri yedijithali. Umanyano luqhubele phambili ngo-2016 ukufezekisa amathuba amatsha okukhula kumashishini nakwiziseko zophuhliso ngokudityaniswa kweemodeli zobunjineli zedijithali ezisebenzisanayo namanyathelo okuqala otyalo-mali. Ukugxila kumawele edijithali kunye ne-MindSphere efundwayo, umanyano lusebenzisa iimodeli zobunjineli zedijithali kwimisebenzi ebonakalayo kunye nokusebenza kweeasethi zoncedo oluhlanganisiweyo oluvumela ukusetyenziswa okuphezulu njengesisombululo "sokulinganisa njengeNkonzo" kumjikelo wonke wobomi beasethi. Oku kunciphisa iindleko zokujikeleza kobomi ukususela ekubeni uyilo, ukumiliselwa, kunye nokusebenza kungaphunyezwa ngokusebenza ngamawele idijithali ngokuqaliswa kokuqala kuphela xa kudibana konke okulindelweyo kunye nokubalula. Imeko yedatha edityanisiweyo ebaluleke koku inikezela isiphelo sendawo yokuphelela yedijithali eyila amawele enkqubo kunye nexabiso lezinto ezibonakalayo. Kwintsebenziswano yamva nje, omabini amaqela aqalise ukuJonga isiTyalo ukuze uqhagamshele, Umxholo, uQinisekise, kunye neMbono yeDatha ukuze ubone amawele aphilayo edijithali ukuze abasebenzisi bafumane ulwazi olutsha. EHong Kong, iziko ledolophu yethu yedijithali elikhaliphileyo lihlola izihloko ezifanayo kunye neWindows ukwenza ixabiso labathengi kunye nokukhawulezisa inguqu yesixeko esi-smart.
Uthetha ukuthini malunga neSisombululo esiDibeneyo sesiXeko?
Isisombululo esiDibeneyo seSixeko (CCS) sidibanisa i-Intanethi yezinto, ikhompyutha, kunye neetekhnoloji zonxibelelwano ukuze kuxhaswe ulawulo lweedolophu kunye nokwenza kube lula kuluntu. Idatha eqokelelwe ziisenzi zem sensors kunye nezixhobo ezihle ezihlanganisiweyo kunye nezixhaswe yi-MindSphere, izixazululo zedolophu ezixhumeneyo zisebenza ngokuhambisa umda wedolophu ngokuvumela uqhagamshelo lwe-IoT kunye nokuqokelelwa kwedatha yesixeko kunye nokuhlaziywa. Ukwanda kwezandi ze-IoT esixekweni kunokuvumela ukuqokelelwa kweenkcukacha zemo engqongileyo, kubandakanya ukuqaqamba kokusingqongileyo, ukugcwala kwezendlela, idatha yokusingqongileyo kubandakanya ubushushu, umswakama, uxinzelelo, ingxolo, inqanaba lokudlideka, kunye namasuntswana anqunyanyisiweyo. Idatha eqokelelweyo inokuhlaziywa ngobukrelekrele bokubonelela ngolwazi okanye ukubikezela ikamva lemingeni eyahlukeneyo edolophini. Oku kunokuvelisa imibono yenguqu kubacwangcisi besixeko ukujongana nemiceli mngeni enjengokhuselo loluntu, ulawulo lweeaseti, ukusebenza ngamandla, kunye nokudibana kwezithuthi.
Ingaba i-Nokia inceda njani ekwakheni uluntu lwabaphuhlisi besixeko ngokugxila kwimfundo?
INokia Smart City Development Community (SSCDC) yasekwa nge-24 kaJanuwari ka-2019 njengokongezwa kwe-hub yethu yedijithali ye-smart city harness yokuhlanganisa kunye nokwandisa amandla e-Mindsphere. I-SSCDC ifaka amaqabane oshishino, iingcali zezobuchwephesha, ii-SME, kunye neziqalo kuphuhliso lwesixeko esiliqhetseba ngokwabelana ngolwazi, imibono yentsebenziswano, uthungelwano kunye namathuba entsebenziswano. Ineenjongo ezi-4 eziphambili:
Ezemfundo: Ibonelela ngoqeqesho lwe-IoT oluphambili, iindibano zokusebenzisana kunye neesemina ezijolise kwimarike ukuxhasa iitalente zalapha ekhaya, iinjineli, ezemfundo kunye neCXO ekuphuhliseni izisombululo zedijithali.
Uthungelwano: Yakha iinethiwekhi zobungcali ngokwenza amaqela okhethekileyo anomdla aqalayo, ii-SME kunye neenkonzo zokunxibelelana ezininzi ezinamathuba othungelwano kwiinkomfa ezahlukeneyo.
Uyilo lwentsebenzo: I-MindSphere eyiLungelo njengeqonga le-intanethi lokusebenzisana nabantu abanoluvo olufanayo ukuguqula iikhonsepthi zeshishini zibe zizicelo zelizwe lokwenyani.
Ubambiswano: amathuba okubhekisa ukuqalisa okunokubakho kunye nee-SME kuthungelwano lwehlabathi lokuqalisa kunye nokunxibelelana kwamashishini ukuxhobisa amalungu ngolwazi kunye notyalo-mali ukuze kunyuswe isisombululo nge-MindSphere.
Uluntu lukwakhuthaza ubuxhakaxhaka obuluqilima benkqubo yezinto ukuze iinkampani zikwazi ukumelana nokuphazamiseka kwetekhnoloji okubangelwe yi-IoT, bandise amashishini abo, kwaye bajongane nemiceli mngeni yoxinzelelo lwezixeko ezisakhasayo. Ngaphantsi konyaka, i-SSCDC inamalungu angaphezu kwe-120 aneminyhadala eli-13 yoluntu ukusukela kwiindibano zocweyo ze-IoT ukuya kuSuku lweSisombululo seMindSphere, ukuvula amandla e-IoT kunye nokuvelisa incoko ngamathuba okudala indalo.
Nawuphi na umyalezo ofuna ukuwunika ishishini lokwakha / abasebenzisi.
Idigitization izisa utshintsho oluphazamisayo kumashishini amaninzi anokuba sisongelo ukuba awutyeshelwanga, kodwa lithuba elifanelekileyo. Kwishishini lokwakha elinomceli mngeni ngokuhla kwemveliso kunye neendleko ezonyukayo, wonke umjikelo wobomi beprojekthi unokuxhamla kwikhompyutha.
Umzekelo, imodeli yolwazi yokwakha inokuthi isilinganise isakhiwo kanye nasemzimbeni, kwaye ulwakhiwo luqala kuphela emva kokudibana konke okulindelweyo kunye nokubalula. Oku kunokuphuculwa nge-MindSphere, eyenza ukuba kuqokelelwe idatha yexesha-langempela, ukudibanisa, kunye nokuhlalutya kuwo wonke umjikelo wolwakhiwo, kuvula amathuba ngakumbi ajolise kumawele edijithali yeprojekthi. Oku kukwenza ukuba ukudityaniswa kweetekhnoloji ezinjengezixhobo zokwengeza ezinokuthi zincedise ekwakhiweni kwamacandelo okwakha ukusuka kumawele edijithali ukukhawulezisa ukwamkelwa kwesakhiwo esiHlanganisiweyo seModular (MiC) senkqubo efanelekileyo yokwakha.
Ukuguqula inkqubo yokubeka esweni kunye neyokuqinisekisa ukwakhiwa, okwangoku kusekho ephepheni, izinto ezintsha kwitekhnoloji ye-blockchain zinokwenza ukuba ulawulo kunye nokujonga iiprojekthi zedijithali, kuqinisekiswe ukucaca, ukuthembeka kweerekhodi, kunye nokuphucula ukusebenza. Ukudalwa komhlaba unikezela ngamathuba afikelela kude kwaye kuguqula indlela esakha, sisebenzisana ngayo, kwaye sisebenze ngayo, siphucula kakhulu imveliso yokwakha kwaye sinciphise iindleko zeeprojekthi, ngelixa sivelisa izibonelelo ezinokulinganiselwa kulo lonke ixesha lokujikeleza kwesakhiwo. .
Ngaba i-Nokia iyasebenzisana nezinye iinkampani ukwakha itekhnoloji yokuphelisa ezenza ukuba kudalwe / kugcinwe izixeko ezihlakaniphile?
I-Nokia isoloko ivulekile ukusebenza nezinye iinkampani kwaye ayinqingwanga kwiinkampani.
I-Nokia isayine imemorandam yokuqonda kunye nokwakha ubudlelwane obuthile e-Hong Kong ukukhawulezisa uphuhliso lwesixeko esilumkileyo, umzekelo:
I-Smart City Consortium (i-SCC): Ixhuma i-MindSphere kuluntu lwesixeko saseHong Kong ukuba babonise indlela i-MindSphere enokusebenza njengeqonga lesixeko se-IoT.
IHong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP): Ukusebenzisana ngokukhawuleza kuphuculo lwezisombululo zesixeko kunye ne-IoT kunye nohlalutyo lwedatha
I-CLP: Phuhlisa iiprojekthi zokulinga kwigridi yamandla, isixeko esilumkileyo, ukuveliswa kwamandla kunye nokuqina kwe-cybersecurity.
I-MTR: Dala izisombululo zedijithali zokwandisa imisebenzi kaloliwe kusetyenziswa uhlaziyo
I-VTC: Hlakulela iitalente zesizukulwana esilandelayo ukuze kuqinisekiswe uzinzo lwendalo kunye nokuzisa izimvo ezintsha zokwenza izinto kwixesha elizayo.
NgoJanuwari walo nyaka, abakwaNokia baphinde bathatha inxaxheba kwiNkqubo yeGreaterBayX Scalerater, inyathelo elidibeneyo lokuqalisa kunye neenkampani eziphambili ezinje ngeGreater Bay Ventures, HSBC kunye neMicrosoft ukunceda abalinganiswa ukuba baqonde umbono wesixeko sabo kwaye basebenzise amathuba akhulayo. indawo enkulu ye-bay ngolwazi lwethu lwesizinda.
I-FARO iya kubonisa umbono wayo wetekhnoloji ye-3D ye-geospatial kunye nolwakhiwo kwiForam yeHlabathi yeHlabathi ye-2020
I-Geofumadas - kwimizila yalo mzuzu wedijithali